Best Games Android 2015
Ma waxaad raadineysaa ugu fiican kulan Android ee 2015 si ay u soo bixi? Eeg dheeraad ah lahayn, maxaa yeelay cajiib ah, madadaalo, iyo ugu fiican android kulan 2015 ayaa la soo xulay si taxadar leh aad ula faraxsanahay. Haddii aad soo gaaray ka Samsung Galaxy cusub, Nexus, ama Sony, waxaad ka heli doontaa a complete-ka hoos kulan xiiso badan oo aad ka heli kartaa oo kaliya in aad male. Arrintan oo uu weheliyo liiska kulan ugu fiican, waxaad ka heli doontaa updates badan oo ka mid ah kulamada, ratings, qiimaha, iyo qaar ka mid ah macluumaad kale oo faa'iido leh in ay xaqiijin doonaan in aad doorato oo kaliya ciyaarta oo aad dooni. Sidaas darted, haddii aad diyaar u tahay in ay bilaabaan ruxid oo duuban, halkan waa kuwa ugu khayr 20 kulan oo Android 2015.
1. Had iyo jeer Mararka qaarkood wuxuush
Mararka qaarkood Had iyo wuxuush ku guuleystay abaalmarinta waayo, qorniinkii ugu fiican 2004. Kulankaan ayaa wuxuu ku saabsan yahay nolosha iyo mashaakil waxa ku jira. Khuseeya kala duwan ee nolosha inta badan ku deldesheen oo dhinaca adag waxaa soo bandhigay in kulankaan. Players Ka heli kartaa diyaar u ah inay la kulmaan xaalado suurto-a-aaminsan in ku dhawaad ​​la mid ah xaqiiqda iyo xaaladaha aad ku qasbi doonaa inay sameeyaan doorashooyin yihiin, iyo sidoo kale raadka ay.
Chrono Ginger horumarsan by Dream Team; nooc ageless ee ciyaarta taas oo si fiican loo arkaa ee Kacaanka. Waxaa xiddigaha story Tacaddi iyo gameplay kacdoonka ah ee safarka waqti iyo biimayn xad-dhaaf ah. Ciyaarta ayaa ku qabsada danaha warshadaha ciyaaraha ka; iyo tan iyo markii ay hordhac u iibiyey malaayiin koobi dunida oo dhan.
Platform: Androids 4.1 oo lagu daray
Banner Saga waa Viking kulan dhiiriyo in ay qaadataa ciyaartoyda Safar horeysay ay ku leeyihiin si ay u sameeyaan go'aano istiraatiiji ah kaas oo sidoo kale soo jeedin in ay saameyn ku warkooda shakhsi. Sidoo kale, marka laga reebo la saamayn heer shakhsi aad go'aanka, waxay sidoo kale saameyn ku yeelan doonto natiijada isku dhacyada kulmay intii uu halganka si ay u noolaadaan.
4. Xabsiga Life RPG
Nolosha xabsiga RPG ayaa helay abaalmarino badan oo tan iyo markii ay hordhac aduunka ciyaarta galay. Waxaa lagu qiimeeyaa ugu sareeya 1 app bixisay in kulan oo dhan, hogaanka kulan 1 RPG ee ku saabsan 89 dal, hogaanka 3 kulan bixisay dhawaan ka dhacay Maraykanka iyo qaar badan. Ciyaarta waa sidaas oo xiiso leh marka aad bilowdo u ciyaaro aad u rabin inay joojiyaan. Xabsiga Life RPG, taasina waa ciyaar block Qaamuuska waa hubaal doono wow aad.
5. weerarkii Habeenka
Weerar Habeenka waa ciyaar premium in uu yahay waa in ay leeyihiin taageerayaasha in sheeegateen oo noqon ku salaysan iyo muujiyaan kulan boos. Ma waxaad tahay qof taageere ah oo Stevens Caalamka? Haddii aadan aad, ka dib markii uu ciyaaro ciyaarta hubaal noqon doonaa mid. Waxaa la amaanay sida ciyaar in qof kasta oo ku raaxaysan karaan iyo sida ay opinion oo caan ah, ciyaarta ayaa la sheegay in mid ka mid ah mobile ka RPG ugu fiican.
6. wuxuush cunay Dhalashada Cake
Wuxuush cunay cake aan dhalashadiisa sida magacaba ka muuqata waa ciyaar in uu yahay macaanka-ka buuxaan wuxuush. Marka laga reebo wuxuush, waxa ay sidoo kale maraan qaababka kale sida keega, jajabkii xujo, characters in aan la quful karo, koofiyadaha doqonimo, eyga Weiner, qarinno wadooyin, iwm Haddii aad u jeclaan biimayn, markaas waxaad dhab ahaan ku dhici doonaan jacayl la kulankaan. Waxaa jira waxyaabo badan oo in la sameeyo, meelo si aad u aragto sida Island sixir ah, Gogapoe Island, iyo kuwo kale.
7. Boomerang Samee iyo Race
Weligaa ma doonayay in la abuuro goosh ah Boomerang iyo malaha kula tartanto characters cartoon ee tartanka baabuurta? Haddii aadan haysan, markaas taasi ciyaarta cartoon Boomerang waa xaq aad u maadaama ay aad u saamaxaaya in ay aad la abuuro gaari tartanka gaar ah aad u gaarka ah.
Platform: Androids 4.0 oo lagu daray
Maxaad u malaynaysaa inay ku dhacay markii tuug khatar baxsaday xabsiga ku saabsan xaq markii bisad lahaa gabar yar oo helay soo xadday? Haddii aad u yaabsan, sababta ma waxaad kala soo bixi kaliya kulankaan si aad u ogaato. Kulankaan ayaa si gaar ah waxaa loogu talagalay carruurta ay da'doodu u dhaxayso 4 ilaa 7 sano jir.
Platform: Androids 4.1 ilaa
Ma waxaad aad u jecel yihiin inay ku ciyaaraan gubanaya jeer u quudhin kulan? Haddii jawaabtaadu tahay haa, ka dibna ku boodaan oo kala soo bixi kulankaan oo ay la kulmaan characters iyo meelaha sida godxabsiga, Candy boqorada, Jake iyo tifqaan wejiga fin, iwm
10. Maalka keen Adventure Time Game
Kulankaan ayaa wuxuu ka kooban yahay characters sida awoodaha Maalmihii, xujooyinka twisty, Mas stretchy, boqortooyooyinka dhadhan fiican, iyo qaar badan oo.
11. Duqonka bolse in Meatland
Waxaa garaaca qof ayaa ku fikirayaan waxa bolse ah ku yahay Meatland ah - dhab ahaantii? Tani waa ciyaar taas oo ah doqon ah oo sidoo kale u muuqataa doqon ah. Players In kulankaan uu wakiil ka ah bolse iskala isku dayayaan in ay hesho by dunida halista ah.
12. Ma ka dhimo
Tani ma eg kulan heshiis dhab ah; laakiin ma laydin khiyaanayn, waa ka xiiso badan intii codadka. Waxay bixisaa dhimbiilo xiiso-jeer aad isku daydo inaad hanuuniyo 15 rakaab ah ka hal dhibic in kale.
13. baafinaya ayaa
Platform: Androids 3.0 oo lagu daray
Weligaa ma u rajeeyay in uu noqdo Baare? Sidee ku saabsan degsado kulankaan si ay u arkaan sida baare jilitaanka Sam Pearce ciyaara dhamaadka.
14. weeraryahanka Go
Fikradda ee ciyaarta waxaa diiradda lagu dhaqaaqo Agent 47 qaab figurine wareega isku xigxiga oo ka mid ah heerarka Roobka ku salaysan oo aan ilaalada ka tabaabushayso falalka aad.
Tani waa kulan kale oo Android 2015 in qaadataa shot a at kaarka ku biirtay tirada on ciyaarta isticmaalaya dhufsanayaasha kaliya ee threes.
16. mashearulxaraam Valley
Tani waa ciyaar abaalmarinta ku guuleystay in lagu wadaa taxane ah Escher. Ujeedada ciyaartoyda waa in ay isku dubaridi heerka dhex qoqobada aragtida ah.
17. awow hooyo Smith Free
Tani waa fursad aad u ciyaaro nin wanaagsan oo kaa caawin awow hooyo Smith qabtaan tuug la xadid tufaax iyada.
18. Baahida Speed ​​Aadka loo Raadinayo
Kulankaan ayaa ah mid ka mid ka mid ah oo aad u cajiib ah la sawiro aad looga cabsado. Waxay isticmaalaan si ay xad aad madal mobile.
19. Asphalt 8: hawada
Tani waa tartanka Arcade isku xigxiga oo kulan midabo iyo xiiso leh in qof kasta oo jecel inuu ka ciyaaro - biir ee stunts degdeg ah, firfircoon, iyo anteenada.
Platform: Androids: s.3 oo lagu daray
Tani waa kulan kale oo cajiib ah in tartanka gaysteen oo tartanka nolosha dhabta ah ku dhowaad dhammaataan. Players Ayaa la filayaa in la wado tartanka baabuurta ay 10 kuwan raadkaygay ku wareegsanaa adduunka.
Ma riyaaqay safarka ilaa iyo haatan maraya Androids kuwaas oo kulan 2015 xulashada? Haddii aad qabto, ka dibna aad ka tanaasusho doonaa, taasina ay tahay doorashada la yaab leh in ballan xamuulka oo xiiso leh iyo farax. Sababta aan hadda bilaabi soo degsado qof ku dhaco aad malana?
> Resource > Emulator > Best kulan android 2015